News - Rajada horumarinta ee biirka dhalada iyo dhalada khamriga ..
Rajada horumarinta ee biirka dhalada iyo dhalada khamriga ..
Dhalooyinka quraaradaha ah iyo konteynarrada waxaa badanaa loo isticmaalaa warshadaha khamriga iyo kuwa aan aalkolada lahayn, kuwaas oo ilaalin kara firfircoonida kiimikada, ma dhalaysnimada iyo soo-noqoshada. Qiimaha suuqa ee dhalooyinka quraaradaha iyo konteenarrada sannadka 2019 waa 60.91 bilyan oo doolarka Mareykanka ah, oo la filayo inuu gaaro 77.25 bilyan oo doolar 2025, iyo heerka kobaca sanadlaha isku dhafan ee u dhexeeya sannadaha 2020 iyo 2025 waa 4.13%
Baakadaha dhalada waa wax aad loo cusboonaysiin karo, taas oo ka dhigaysa xulasho ku habboon alaabooyinka baakadaha xagga aragtida deegaanka. Dib-u-warshadaynta 6 tan oo muraayad ah waxay si toos ah u badbaadin kartaa 6 tan oo kheyraad ah waxayna yareyn kartaa 1 tan oo ah qiiqa CO2.
Mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee kicinaya koritaanka suuqa dhalada dhalada ayaa ah kororka isticmaalka khamriga ee dalal badan. Beer waa mid ka mid ah cabitaannada aalkolada leh ee lagu buuxiyo dhalooyinka quraaradaha ah. Waxay ku jirtaa mugdidhalada dhalada ahsi loo ilaaliyo waxyaabaha ku jira. Haddii walxahan ay ku dhacaan iftiinka 'ultraviolet light', si fudud ayey uga sii dari karaan. Intaa waxaa dheer, sida laga soo xigtay NBWA Industry Affairs ee 2019, macaamiisha da'doodu tahay 21 iyo wixii ka weyn Mareykanka waxay isticmaalaan in ka badan 26.5 galaan oo biir ah iyo cider qofkiiba sanadkii.
Dhalada quraaradahawaa mid ka mid ah qalabka baakadaha ugu wanaagsan ee loogu talagalay cabitaanka khamriga (sida ruuxyada). Awoodda dhalooyinka dhalada ah si ay u ilaaliso carafta iyo dhadhanka alaabooyinka ayaa keenaya baahida. Alaab-qeybiyeyaal kala duwan oo ku sugan suuqa ayaa sidoo kale arkay baahida sii kordheysa ee warshadaha ruuxyada.
Dhalada dhalada waa shey baakadeyn wanaagsan oo caan ku ah khamriga. Sababta ayaa ah in khamriga aan loo bandhigin qorraxda, haddii kale way dhaawici doontaa. Marka loo eego xogta OIV, soosaarka khamriga ee dalal badan wuxuu ahaa 292.3 milyan oo litir maaliyadeed 2018.
Sida laga soo xigtay Ururka Khamriga ee Qaramada Midoobey, khudradda ayaa ah mid ka mid ah isbedelada wanaagsan ee dhaqsaha leh ee khamriga, kaas oo la filayo inuu ka muuqdo wax soo saarka khamriga. Tani waxay dhiirrigelin doontaa soo bixitaanka khudradda khudradda ee khudradda, sidaa darteed tiro badan oo dhalooyin quraarad ah ayaa loo baahan yahay.